Forum serasera malagasy Fahatsiarovana ny 13 mai 1972 - Dinika forum.serasera.org
Fahatsiarovana ny 13 mai 1972
Fitohizan'ny hafatra : Fahatsiarovana ny 13 mai 1972
dd - 17/05/2003 12:00
Asa ianareo raha nisy nahita ilay hafatra tao amin'ny http://www.haisoratra.org/breve.php3?id_breve=38 mitantara ny nanjo ity olona iray tamin'ny ady sy hotakotaka 13 mai 1972. !!!
djiulambout - 17/05/2003 17:10
misaotra ny mpanoratra fa sady mampientanentana no mahaontsa, nefa mahafaritra tsara ny tiana lazaina, mankasitra sady mankatelina foana ny haisoratra malagasy, indrindra fa ny fitantarana ny lafinjavatra mety tsy misy mpahalala kanefa nisy.
Isika ihany no afaka hanadratra avo ny antsika
eugene - 17/05/2003 10:19
Mahaliana ilay lahatsoratra... aoka tokoa hipetraka ho an'ny tantara.
kally - 22/11/2003 12:14
Raha ny hevitro kosa,tsy tsara hipetraka ho tantara fotsiny izany,fa ampitao,tantarao ny ankizy rehetra mba hahalalany fa matoa izy toy izao ny fiainany (na dia tsy mbola sambatra aza isika),dia nisy nahafoy ny ainy,ny heriny,ny fianakaviany,nisy nijaly ho azy tao.Deraiko ireo rehetra nanana herimpo ka isan'ny nitondra ny anjara birikiny ho an'ny fanarenana ny firenentsika.
jhouhlambout - 26/01/2004 15:40
Tokony Internationali-zéna io tantarantsika io toy ny 2è Guerre Mondiale!!!
ratsiraka - 03/02/2004 16:28
Mahafinaritra lé site
dd - 14/05/2004 02:53
dia nihelina sahady izay ny herintaona nanoratako ity hafatro eto ity, mahalasa saina ny fandehan'ny andro sy ny volana ary ny taona araka lay tenin'ny hery tary amin'ny lohahevitra iray tary izay...? (eritreritra sendra nandalo -> http://forum.serasera.org/index.php?rub=viewthread&msgid=m4090fdc0e3142&PHPSESSID=e5a4f3fcab785d935cb1c71d664053cb )
indrindra fa raha ampitahaina amin'izay niseho tamin ny tantaran olona iray, ny fahatsiarovany, ny nataony, ireo sedra nolalovany, ...
iezahany mitadidy izany rehetra izany !!
ary raha ho an'olona maro, vahoaka maro no ampitahaina amin'izany fahatsiarovana izany, moa ve mbola mahatadidy sy mahatsiaro, sa efa ririnin-dasa tsy tsaraoana ireny ???
fehiny: tokony mba hanao exercice fitadidina ny taloha isika.. fa ireny no naha izao antsika. Eritrereto fotsiny hoe raha tsy nisy ny 13 mai 1972 dia mba ho toy ny ahoana re no ho fiainantsika amin izao fotoana izao e! ...
kitjo - 14/05/2004 09:26
d inona re zany ny hevitra e
ny ahy tadidiko t@ herintaona mbola tsy nahita ny nosoratan dd fa ry Pety le teo Mahamasina,lolll,
le naondran ol tao @ ranon Anosy ny podium